Galaxy S20 စီးရီးတွေက ၂၀၂၀ မှာ အောင်မြင်မှုပေးနိုင်မလား?
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် Brand Image က အရေးပါဆုံးလို့ ပြောနိုင်သလို ထင်သာမြင်သာဖြစ်စေတဲ့ အချက်တချို့ ထောက်ပြရရင် ၂၀၂၀ ပထမ ၃ လပတ်အတွင်းမှာ စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုး ၄၆.၂၁ ဒေါ်လာ (၃.၂.၂၀၂၀) ရှိနေပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေအဆိုရ ပြောရင်တော့ ၁.၅ ဆ ပိုများလာတာဖြစ်ပြီး Galaxy S20 စီးရီး မြေပေါ် ခြေမခင် ပေါက်နေတဲ့တန်ဖိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကုမ္ပဏီတန်ကြေး ဒေါ်လာ ၃၀၁ ဘီလီယံနဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၈ နေရာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလအတွင်း ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် နှစ်အစမှာ အဝင်ကောင်းနေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အတိုင်းတာနဲ့ ထောက်ပြရရင် အဆင့် ၂၈ ကနေ ခုန်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Samsung ဘာတွေ မျှော်လင့်နေလဲ?
ဆိုတော့ Galaxy Unpack Event ကနေ ပြန်ပြောတာပေါ့။ ကျွန်တော် အပါဝင် အများစု လက်ခံထားတဲ့အချက်က S20 စီးရီးတွေဟာ စျေးကြီးတယ် (တော်ရုံ စျေးကြီးတာတောင် မဟုတ်ဘဲ Exynos ဖုန်းတစ်လုံးကို သိန်း ၂၀ ပေးကိုင်ရတဲ့အထိလို့ ပြောကြတယ်)
Image Credit CNet)
မှန်ပါတယ်၊ Professional ဆန်ဆန် ပြောရရင်တော့ စတော့ရှယ်ယာ ဒေါ်လာ ၉၃၆ ဘီလီယံအထိ ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ အရှိန်ဝါ တနည်းပြောရရင် ၂၀၂၀ အတွက် Samsung Electronics ဆိုင်းပြင်နေတဲ့ မိုနိုပိုလီ ပါပဲ။
နားလည်အောင် အကျဥ်းပြောရရင် Semi-conductor လုပ်ငန်းစုတွေဖြစ်တဲ့ 12GB/16GB LPDDR5 RAM Chip ၊ GDDR6 Graphics Memory တွေအပြင် 5nm ၊ 7nm Chip နဲ့ AMOLED Display တွေ အကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းမယ့်နှစ်လို့ တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ထပ်ပြီး မြင်သာအောင် ပြောရရင် ကျွမ်းကျင်သူ Ming Chi Kuo ဆိုသူက Galaxy S20 စီးရီး အလုံးရေ ၃၃ သန်း ရောင်းချရနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ S10 စီးရီးတွေနဲ့ (၃၈ သန်း) အရမ်း မကွာသလို ၂၀၁၆ တုန်းက ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ Galaxy S7 ၊ S8 တို့ရဲ့ သန်း ၅၀ ကျော် ပမာဏကို မမီသေးပါဘူး။
This is Exclusive!!
ဒီဖုန်းတွေဟာ ၂၀၁၆ ၊ ၂၀၁၇ Flagship ဖုန်းတွေဆိုမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ ခေတ်မီနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် Major Update မရတော့သလို Service လည်း မပေးတော့တဲ့အတွက် ၂ နှစ်သုံးပြီးတာနဲ့ လွှင့်ပစ်ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Galaxy Enterprise Edition ဆိုပြီး ကြေညာလိုက်သလို Software Update ကို ၄ နှစ် ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်။
စီးရီးတစ်ခုအသစ်ထွက်တိုင်း စျေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း Galaxy S10 မော်ဒယ်တွေကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ အထိ Reduce လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မဆိုးသာဘူးပြောရပေမယ့် Enterprise Edition ဟာ S10 မော်ဒယ်မှ စပြီး အကျုံးဝင်မယ်၊ A စီးရီးတွေအတွက် မသိရေသးပါဘူး
ဒီတော့ S20 စီးရီးတွေက ကင်မရာပိုင်း ပိုကောင်းလာတယ်၊ Hardware ပိုင်း ပိုကြမ်းလာတယ်ဆိုမယ့် Real Innovation မတွေ့ရဘူး။ အထူးသဖြင့် Entry Level Price ကို ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ သတ်မှတ်လိုက်တာက ရွေးချယ်ရ ခက်သွားစေသလို အများအမြင် ဘာကိစ္စ Samsung ဝယ်မှာတုန်း ၊ iPhone ပဲ ရွေးကြမယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ဗိုင်းရက်စ်ကြောင့် ထင်သလောက် ရောင်းအားမသွက်ဘူးလို့ ကြေညာထားပေမယ့် ၂၀၂၀ စမတ်ဖုန်း စျေးကွက်ကို တနည်းမဟုတ်တနည်း ရိုက်ခတ်လာမယ့် Key Selling Point တွေကို Samsung ချသွားခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒါတွေက
12GB LPDDR5 RAM (High-end ဆိုရင် 16GB)
Triple Camera with 3x Optical Zoom
Topnotch AMOLED Display နဲ့
Competetive Price ($1,000) ပါပဲ
ဒါကြောင့် Flagship စမတ်ဖုန်းစာရင်းဝင်ဖြစ်လာဖို့ ဒီအချက်တွေ ပါဝင်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Real Challenge က Samsung ထက် စျေးသက်သာအောင် ထုတ်နိုင်မလား မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိအတွက် Galaxy S20 ကို ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ နဲ့ ရောင်းချထားပြီး အရင်နှစ် S10e နဲ့ယှဥ်ရင် ဒေါ်လာ ၂၅၀ လောက် ကွာလာတယ်၊ အဲ့ဒီ Gap ကို ပြန်ကျုံ့လိုက်ရင် မော်ဒယ်သစ်မှာ 120Hz (3440 x 1440) Display ၊ ပိုကောင်းတဲ့ Triple Camera နဲ့ မသိမသာ ပိုကောင်းလာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရရှိမယ်။
ဒါမယ့် Ming Chi Kuo ပြောသလို ဘာ Innovation မှမရှိဘူး။ တနည်းပြောရင်တော့ ဒီတနှစ် Fail နိုင်တယ်၊ Fail တယ်ဆိုတာ S9 တုန်းကလို အခြေနေမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် Counter Point Research က အလုံးရေ သန်း ၄၀ အထက် ရောင်းရနိုင်တယ်လို့ ပြောပြန်တယ်။
ဒေါ်လာ ၈၅၀ တန် S20 (LTE Version) တန်ဖိုးပေါ် မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါင်းလက္ခဏာပေါ်မှာ ရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ 5G နိုင်ငံတွေမှာ စျေးကွက်ထဲ ရောက်နှင့်နေတဲ့ Samsung ဖုန်းသစ်ကို သုံးကျမှာပဲ (ရွေးစရာ ရှားသေးလို့)
Samsung အနေနဲ့ Risk ယူတာ များလွန်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ထောက်ပြသလို ၂၀၂၀ စမတ်ဖုန်း Trend က တမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲလာမယ်။ ဒိအတွက် ၂၀၂၀ Flagship ဖုန်းတွေ Samsung ထက် စျေးကြီးလာဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် Price to performance ကို ပြန်အချိုးချရရင် ဘယ်လိုမှ တန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးမရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရောင်းချနေတဲ့ မော်ဒယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တန်ဖိုးတွေလည်း စာဖတ်သူတွေ သိပြီးသားထင်ပါတယ်။
အခုစာပိုဒ်ကို ဖတ်ရှုရင်း ဘယ်လို အတွေးဝင်သွားလဲ? မေးစရာတော့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်၊ ဒါမယ့် ထင်မြင်တာလေး သုံးသပ်ကြည့်သွားပါဦး
Source: GizmoChina ၊ Counterpoint Research ၊ Business Insider ၊ Koreaherald ၊ Samsung